[BARO] Sida loo abuuro bogga AUTOMATIC WEB
Inicio/Tiknoolaji/Sida loo abuuro bogga AUTOMATIC [Laga bilaabo xoq]
Baro sida loo abuuro websaydhka ugu fiican otomaatiga leh talaabooyinkan fudud ee aan ku tusayno.
0 984 18 daqiiqo akhri
Bogagga tooska ah waxay noqdeen ganacsi wanaagsan sannadihii la soo dhaafay, iyada oo ay ugu wacan tahay qaababka lacag-u-dejineed ee kala duwan ee aan ku sameyn karno bogagga otomaatiga ah isla markaana aan ku helno faa'iidooyin badan. Kiiska ugu fiican ayaa ah inay tahay mid ka mid ah hababka lacag-dejinta ugu fudud ee aan isticmaali karno.
Fursadan waxaan ku baran doonnaa talaabo talaabo talaabo ah waxa aan sameyno si aan si toos ah ugu sameyno bogga tooska ah, si fiican, ama in la abuuro a PBN ee bogagga iswada taasi waxay kaaga tagi kartaa miro ama waad iibin kartaa. Tan awgeed waxaan ka bilaabi doonnaa waxa ugu muhiimsan ee loogu talagalay bogagga shabakadda sida domain iyo web hosting. Waxaan wax ka baran doonnaa barnaamijka bogga tooska ah waxaanan arki doonaa noocyada shabakadaha otomaatiga ah ee aan sameyn karno. Waxaan sidoo kale falanqeyn doonaa noocyada maaddooyinka aan ka sameysan karno degel otomaatig ah oo xitaa waxaan xusi doonnaa qaababka ugu caansan ee lacag-ururinta aan ku isticmaali karno.
1 Tallaabada ugu horreysa ee Shabakadda Tooska ah
2 Domainka iyo Marti gelinta
2.2 Marti gelinta
3 Abuur degel toos ah oo leh WordPress
3.1 Blogs otomaatig ah
3.2 Mawduucyada ugufiican ama tusaalooyinka laguugula talinayo Blog otomaatig ah
3.2.1.1 Hadalada Astra ee Wp:
3.2.2 Qorshaha Mawduuca Lite
3.2.2.1 U Kuurgalida Mawduuca Qorshaha:
3.2.3.1 Mawduucyada Divi Theme ee WP:
3.2.4.1 U fiirsashada Ocean WP:
3.2.5 Abuur Saxaafadda:
3.2.5.1 Kormeerayaasha GeneratePress:
3.3 Waxyaabaha ugu fiican ee loogu talagalay Blog toos ah
3.3.1 WP otomaatig ah
4 Bogga tooska ah ee Wp Automatic
5 Ikhtiyaarrada waxyaabaha ku jira Shabakadda Tooska ah
5.1 Daabac olole otomaatig ah
6 Bogagga tooska ah ee leh asalka asalka
6.1 Ikhtiyaarrada kale si aad u rogto waxa ku jira
7 Halkee laga helayaa waxyaabo tayo sare leh oo otomaatig ah
7.1 Sida looga sameeyo waxyaabaha ku jira Maqaallada Qormooyinka
8 Bogagga Tooska ah ee loogu talagalay Amazon
8.1 Ikhtiyaarrada loogu talagalay Amazon Automatic
8.2 U Ololee Websaytka Tooska ah ee loogu talagalay Amazon
8.3 Mawduucyada Websaydhka Iswada ee loogu talagalay Amazon
8.3.1 Qaab-dhismeedka Bilowga
8.3.2 Mawduuca Dike
8.3.3 Suuq-geynta Pro
8.3.5 Qulqulka Lacagta
9 Talooyin haddii aad rabto inaad sameysato Web toos ah
9.1 Talooyinka lacag-bixinta ee bogagga shabakadda otomatiga ah (gaar ahaan baloogyada)
9.1.1 Beddelka Adsense: [HAGAHA] Sida loo iibiyo xiriiriyeyaasha isboorti iyo maqaallada.
9.2 Hubi qaabka Khariidadda bogga iyo waxyaabaha cusub ee la geliyay
9.3 Adeegso beddelaha sawirka Webp
9.4 Si joogto ah u tirtir waxyaabaha aan waxtar lahayn ee la soo saaray
10.1 Waan jeclahay tan:
Tallaabada ugu horreysa ee Shabakadda Tooska ah
Ujeedada aan ka leenahay qoraalkan ayaa ah inaan falanqeyno oo aan abuurno degel toos ah oo runti fuliya shaqooyinka ka dhigaya otomatiga.; waxaa lagama maarmaan ah inay awood u leedahay inay si toos ah uga soo saarto waxyaabaha iyada oo aan loo baahnayn wax ka beddel ballaaran.
Sababtaas awgeed, waa inaan sheegnaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee badanaa dhaca marka la doonayo in la sameeyo degel qaabkan ah. Dhibaatada ugu weyn ee websaydhada otomaatiga ahi yeelan karto waa iyada oo loo eegayo qadarka ku jira, websaydhka martigelinaya, maxaa yeelay wuu liitaa, uma adkaysanayo dalabaadka degelkeenna.
Sababtaas darteed waa fikrad xun in la isticmaalo Martigelin xun marka la doonayo in la sameeyo degel toos ah. Sababtaas awgeed, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaan iibsanno Marti-gelin xirfad-yaqaan ah. Waxaa jira xirmooyin badan oo xirfadleyaal ah oo martigelin ah iyo xitaa kuwa la xayeysiiyo oo ay leeyihiin tixraacyo aad u wanaagsan. Laakiin xaaladdan waxaan ku sheegi doonnaa laba baakad oo aad u wanaagsan oo loo isticmaali karo degel kasta oo otomaatig ah. Midka koowaad waa banahosting tan labaadna waa shirkadaha webka.
Banahosting Waxaa si aad ah loogu talinayaa kuwa isticmaala ee ku yaal Ameerika. Laakiin dadka isticmaala Yurub waxaa ugu wanaagsan inay u janjeeraan dhanka shirkadaha webka.
Domainka iyo Marti gelinta
Kuwa aan aqoon u lahayn boggaga shabakadda isla markaana doonaya inay bilaabaan sahaminta adduunkan, waxaan si kooban ugu sharraxeynaa macnaha Domain iyo Hosting. Si aan awood ugu yeelano sameynta degel otomatik ah waxaan u baahanahay inaan yeelano domain (nombre) iyo Marti gelin (web hosting).
Waa cinwaanka uu qofku u tagayo inuu ka galo websaydhkayaga.
El Marti gelinta
Waa hoyga meesha aan macluumaadka ku dhejin doonno boggeena, si dadku markay u dhigayaan cinwaankeenna ay u helaan macluumaadka aan martigelinno.
Waxaad ka iibsan kartaa labada domain iyo Hosting labadaba banahosting ama shirkadaha websaydhka. Mar alla markii aad yeelato domain iyo Hosting, tallaabada xigta waxay noqon doontaa barnaamijka webka otomaatiga ah. Qoraalkan waxaan u qorsheyn doonnaa degelkeena otomatiga ah iyadoo la adeegsanayo aaladda WordPress.
WordPress waa maamule websaydh halkaas oo aan ku qaban karno hawlo kala duwan si ka fudud intii aan toos ugu qaban lahayn barnaamijyada. Mid ka mid ah howlahaas la fududeyn doono waxay noqon doontaa in boggayaga laga dhigo mid otomaatig ah, kaas oo aan ugu talagalin doonno degelkeenna iyadoo la adeegsanayo WordPress si loo fududeeyo nidaamyadan.
Abuur degel toos ah oo leh WordPress
WordPress shaki la'aan waa aalad fududeyn doonta abuurista degelkeena otomatiga ah. Tani waa sababta oo ah maamulkan si heer sare ah ayaa loo horumariyay oo wuxuu leeyahay suurtogalnimada inuu adeegsado fiilooyin. Plugins waa barnaamijyo websaydh ah oo aan rakibi karno barnaamijyadan gudahoodna, waxaa jira kuwa aan u adeegsan karno sameynta degelkeenna si otomaatig ah. Waxaan horey u soo sheegnay maqaal kale waa maxay WordPress plugins, noocyadooda iyo shaqooyinkooda.
Waxaan xusi doonnaa liistada plugins ee aad u baahan doonto si aad u sameysid websaydhkaaga otomatiga ah, dhinaca kale sidoo kale waa inaan ka hadalnaa mowduucyada. Mawduucyada si loo sameeyo websaydhada si otomaatig ah waxay runti ku tiirsan yihiin ujeedooyinkayagu, sababtaas awgeed waa inaan u kala saarnaa xaqiijinta tooska ah ee shabakadda lacag-u-helidda baloogyada ama lacag-ururinta ay la leeyihiin shirkadaha Amazon.
Waa in la ogaadaa inaan sidoo kale ka hadalno waxyaabaha aan ku soo bandhigno degelkeena otomaatiga ah iyo xaaladiisa. Guud ahaan, websaydhada iswada ayaa leh waxyaabo la duubay, laakiin waa inaan ka gudubnaa tan oo aan helnaa bedel noo oggolaanaya inaan helno waxyaabo tayo sare leh. Marka waxaan sidoo kale ka hadli doonaa kuwan beddelka ah si loogu sameeyo mareeg toos ah.
Blogs otomaatig ah
Blogs waa degello aan ka heli karno macluumaad kala duwan oo ku saabsan mowduuc gaar ah. Iyagu waa degello war-bixin heer sare ah leh oo ujeedadoodu tahay inay macluumaad qiimo leh siiyaan adeegsadayaasha booqda.. Marka laga hadlayo baloogyada otomaatigga ah, waxay leeyihiin astaamo ay uga soo saaraan waxyaabaha ku jira baloogyada horay loo sameeyay. Tan waxaan u baahan doonaa inaan u adeegsanno mawduuc aan ku daabici karno qoraallada qaab aad u fudud iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah bartayada si toos ah ugu shaqeysa.
Mawduucyada ugufiican ama tusaalooyinka laguugula talinayo Blog otomaatig ah
Marka laga hadlayo bogagga tooska ah ama baloogyada, waxaan u baahanahay inaan helno mawduuc ama shax leh muuqaal u oggolaanaya horumarinta barta otomatiga ah iyada oo aan loo baahnayn inaan qayb firfircoon ka noqonno daabacaadda. Sidaa darteed, waxaan u baahan doonaa mawduuc fudud si aan u awoodno inaan sameysano baloog otomatik ah. Waxaan ubaahanahay inay ahaato mid aan cusleyn oo sifiican u fiiriya marka laga hadlayo qoraalada otomaatiga ah. Waa tan liiska mawduucyada loogu talagalay blogyada otomaatiga ah:
Astra demo pre-rakibi karo (https://citeia.com)
Hadalada Astra ee Wp:
Dhibco: 5 ka mid ah 5tii.
Mawduucan WordPress-ka ah runtii waxtar buu u leeyahay sameynta degellada tooska ah, hubaal waad horay u maqashay, maxaa yeelay waa shay la waafajin karo ku dhowaad nooc kasta oo mashruuc ah.
Astra waa shaashad WordPress ah oo aad loo habeeyo koodhkeeda, ma laha koodh xad-dhaaf ah oo hoos u dhigi kara bartaada. Waa shey wax soo dejinaya oo deg deg ah, muuqaal aad u fudud oo si fudud wax looga qabanayo guddiga gudaha. Waa wax la beddeli karo xitaa qorshaheeda bilaashka ah.
Template-ku wuxuu taageerayaa dhismayaasha muuqaalka ee soo socda si loo abuuro qorshooyinka dabaqa ama gelitaanka.
Mawduucu wuxuu leeyahay tiro badan oo sheylo ah oo horay loogu sii rakibi karo, taasoo sahlaysa inaad ku bilowdo boggaaga nashqado horay loo aasaasay. Haddii aad rabto inaad aragto dhammaantood waad sameyn kartaa Halkan.
Template waa lacag la'aan, laakiin inta badan la qaabeynta waxay ku xirnaan doontaa qorshaha caymiska. Sidaas darteed haddii aad rabto inaad u qaaddo heer shaqsiyeed iyo mid xirfadeed, waxaad u baahan kartaa inaad iibsato qorshaha caymiska.
Qorshaha Mawduuca Lite
U Kuurgalida Mawduuca Qorshaha:
Waa sheybaar, kaas oo sida kii hore u xawli ku socda oo lagu hagaajinayo dejinta SEO. Mawduucan 'WP Theme' wuxuu leeyahay oo keliya 3 demo oo horay loo sii rakibi karo, sidaas darteed u-habeynta qaab-dhismeedka ayaa ka yaraan doona mawduuca horay loo soo bandhigay. Haddii aad rabto eeg tusmooyinka dhagsii Halkan.
Mawduucyada Divi Theme ee WP:
Waa mawduuc aad ugu habboon oo la jaanqaadi kara noocyo badan oo bogag internet ah, si fududna loo beddeli karo isla markaana leh dhisme muuqaal leh. Mawduucu waa mid si heer sare ah loo habeyn karo, laakiin ma xaqiijinayo xawaaraha rarka sida kuwa kor ku xusan. Waxay u leedahay 9 demo pre-installable websaydhkaaga, haddii aad rabto inaad dhammaantood aragto guji Halkan.
Mawduuca OceanWP ee wordpress (https://citeia.com)
U fiirsashada Ocean WP:
Mawduuc si fiican loo yaqaan, soo dejin deg deg ah oo loogu talagalay SEO. La jaan qaadaya Elementor oo ah dhisme muuqaal ah. Qeybta ugu sareysa waxay leedahay demo badan oo horay loo rakibi karo, sidoo kale waxay siineysaa awood u habeyn weyn. Haddii aad rabto inaad aragto dhammaan tusmooyinka waad riixi kartaa Halkan.
Qaabdhismeedka xawliga degdega ah wuxuu diiradda saaray waxqabadka ugu badan. Ma laha bandhigyo waa la sii rakibayaa, laakiin waxay taageertaa dhismayaasha soo socda ee soo socda:
Gutemberg (Template-ka ayaa aad loogu habeeyay midkan gaar ahaan)
Waxyaabaha ugu fiican ee loogu talagalay Blog toos ah
Bogagga tooska ah ee loogu talagalay, iyo gaar ahaan markaan ka hadlayno baloogyada, waxaan u baahan doonnaa oo keliya 2 Plugins. Midka ugu horreeya ayaa ah kan aan ka heli doonno macluumaadka shabakadda otomaatiga ah, qalabkan loo yaqaan WP otomaatig ah oo waxaan u isticmaali doonaa plugin Auto Spinner, si wax looga beddelo waxyaabaha la helay.
WP otomaatig ah
WP otomaatig ah Waa sheyga aan ku heli karno macluumaadka laga soosaaray bogagga kale si aan ugu adeegsan karno gudaheenna. Si loo helo qalabkan loo baahan yahay waxaan ka raadinaynaa ilo dibadeed oo laga heli karo nooca ugu dambeeyay.
Qalabka leh liisanka asalka ah ee kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho si aan xad lahayn oo aad u hesho dhammaan cusbooneysiintiisa qiimaha $ 30.
Bogga tooska ah ee Wp Automatic
Hadda waxaan falanqeyn doonaa nidaamyada waxa ay tahay inaan sameyno si aan u awoodno inaan macluumaadka uga helno degelkeena otomatiga ah, qalabkan loo yaqaan 'plugin' wuxuu leeyahay xulashooyin kala duwan si loo helo macluumaadka loo baahan yahay. Xulashooyinkaas waxaa ka mid ah kuwa isku dayaya inay soo saaraan waxyaabaha ku jira degel la soo xulay. Tan waa inaan u tagnaa qaybta ololaha cusub ee kumbuyuutarka tooska ah oo aan dooran karnaa xulashada quudinta.
Marka tan la dhammeeyo, waa inaan doorannaa bog aan rabno inaan si otomaatig ah u nuqulno. Waxaa muhiim ah in la ogaado in kaliya gelitaanka kuwa ku jira Quudinta boggaas la koobiyeyn doono. Waxaan kaliya u baahanahay inaan dhigno iskuxiraha bogga hoyga websaydhka si loo koobiyo. Marka tan la sameeyo waxaan heleynaa fursado kala duwan oo aan ku dari karno miirayaal iyo cunsur ololeheena.
sanduuqa ay tahay inaan dhigno iskuxirka si looga soo guuriyo degelkeena otomatiga ah
Ikhtiyaarrada waxyaabaha ku jira Shabakadda Tooska ah
Gudaha qalabka WordPress Automatic Waxaan dooran karnaa xulashooyin kala duwan iyo miirayaal naga caawin doona naqshadeynta dhammaan qoraalada aan si otomaatig ah u sameyn doonno. Taas oo aan ku yeelan doonno suurtagalnimada in aan go'aan ka gaarno inta sawir ee aan kala soo bixi karno webka asalka ah. Meeleynta sawirrada la sheegay; waxaan go'aan ka gaari karnaa haddii aan dooneyno in lagu badbaadiyo foomka sawirka ama in loo soo bandhigo si la mid ah sida looga arko webka asalka ah.
Waxaan sidoo kale haysannaa xulashooyin ku saabsan sawirrada la soo bandhigay, halkaasoo aan ku go'aansan karno haddii aan dooneyno inaan nuqul ka soo qaadno sawir muuqaal ah oo ku saabsan websaydhkeenna. Waxa kale oo jirta suurtagalnimada in la shaandheeyo waxa ku jira Quudinta oo aan ku go'aansan karno qaybaha aan dooneyno in nuqullada la soo guuriyey ku saleysnaadaan ama astaamaha aan dooneyno inaan si gaar ah nuqul uga dhigno.
Sidoo kale, waxaan haynaa ikhtiyaarro wax looga beddelayo qaabka qoraalka iyo cinwaannada, marka lagu daro xaqiiqda ah inaan ka soo saari karno waxyaabaha ku jira bogagga internetka ee Ingiriisiga oo aan ku turjumi karno Isbaanish. Tan waxaan ku hagaajineynaa ikhtiyaarka tarjumaadda oo aan ka heli doonno isla guddigii tafatirka, waxaan si toos ah ugu adeegsan karnaa tarjumaadda Google Translate ay noogu fidiso bilaash ujeedkan.
Daabac olole otomaatig ah
Mar alla markii aan ku guuleysanno in aan qaabeyno wax walba oo la xiriira ololaha loogu talagalay qoraalo otomaatig ah, waa inaan daabacnaa. Waxaa lagugula talinayaa in xulashada daabacaadda ee fiilada aan dhigno Ikhtiyaarka Qabyo, oo macnaheedu yahay qabyo. Tani, haddii aadan hubin waxa qoraallada la dhammaystiray u ekaan doonaan.
badhanka si loogu daabaco ololeyaasha bogagga tooska ah
Marka ololaha la daabaco, si qoraallada ay u bilaabmaan inay ka muuqdaan degelkeenna, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la riixo batoonka Play ee ololaha aan hadda daabacnay. Waxay kuxirantahay tirada saacadaha ee sheyku shaqeynayo, waxay awoodi doontaa inay sameyso maqaallo badan. Si kastaba ha noqotee, si aad u xakameyso degel otomaatig ah waxaad cayimi kartaa inay sameyso daqiiqad ahaan.
Markaad sameyso daqiiqad, waxaad u badan tahay inaad si toos ah u heli doonto farriimaha 1-3 markasta oo aad ciyaareyso. Markaad sameyso saacado aad ayey u badan tahay in ololeyaasha boqolaal farriin la sameyn doono iyada oo aan la kormeerin. Isla ololaha ayaa ku siin doona xiriiriye dhammaan qodobbada ay iyadu sameysay.
badhanka ciyaarta si aad u daabacdo boostada ololaha, kuna xirnaato buluug iskuxirka buluuga ah ee uu sameeyay ololaha qoraalada la sameeyay
Bogagga tooska ah ee leh asalka asalka
Xaqiiqdu waxay tahay inay aad iyo aad noogu adag tahay inaan samayno bogag toos ah oo leh 100% nuxurka asalka ah; waxa aan sameyn karno ayaa ah inaan isticmaalno fiilooyin loo yaqaan 'plugins' Spinners, kuwaas oo awood u leh inay ku beddelaan ereyada qaarkood iskumidooda ugu caansan halkaasna, markay qiimeynayaan waxyaabahayaga, barnaamijyada xatooyada waxay arki doonaan inay leeyihiin astaamo ka wanaagsan kuwii hore.
Furayaasha la heli karo isla waa Gawaarida Gawaarida. Qalabkaani wuxuu awood u leeyahay inuu la shaqeeyo Automattic si ay u awoodaan inay ku fuliyaan ololeyaal leh qiime sare oo ku saabsan barnaamijyada xatooyada. Waa in la ogaadaa in laguma talinayo in loo isticmaalo qalabkan si aad si cad ugu ololeyso kormeer la'aan. Tani waa sababta oo ah ereyada isku macnaha ah qaarkood ayaa laga yaabaa inay meesha ka baxaan, gaar ahaan markaan sameyno ololeyaal laga turjumayo hal luuqad oo luqad kale.
Qalabkaan loogu talagalay bogagga tooska ah waxaa lagu heli karaa qiimo dhan $ 27 gudaha codecayon. Halkaasna waa inay ku siiyaan API-yada lagama maarmaanka u ah inay awood u yeeshaan inay ku xirmaan dhammaan shaqooyinka fiiladan. Mid ka mid ah shaqooyinkaan ayaa ah suurtagalnimada in la iswaafajiyo WordPress Automatic iyo sheygan, oo markaa awood u leh inay ku qoraan maqaallo tayo sare leh boggaaga otomaatiga ah.
Ikhtiyaarrada kale si aad u rogto waxa ku jira
Waxaa jira ikhtiyaarro kale oo dibadeed oo aan si toos ah ugu wareejin karno waxyaabaha ku jira. Laakiin warbaahintani waxay awood u yeelan doontaa inay naga caawiso abuuritaanka waxyaabo tayo sare leh, laakiin ma awoodi doonaan inay toos ugu gudbiyaan waxyaabaha ku jira WordPress-keena. Tani waa sababta oo ah aaladahaani waa bogag internet oo aan si toos ah ugu xirnayn WordPress, markaa waa inaan nuqul ka sameysanno oo ku dhajino WordPress-keena.
Qaabkan waxaan ku heli doonnaa nuxur ahaan hab toos ah otomaatig ah. Laakiin ma awoodi karno inaan dhahno waxaan la yeelan doonnaa bog gebi ahaanba otomaatig ah. Mid ka mid ah macnaheedu waa wareejinta waxyaabaha waa bogga internetka dabada. Waxaa si gaar ah loogula talinayaa kuwa doonaya inay ku sameeyaan luqadda Isbaanishka.
Kuwa adeegsadayaasha doorbidaaya inay ku sameeyaan nuxurka ku qoran Ingiriisiga, waxaan u heli doonnaa xulashooyin wanaagsan oo loogu talagalay luqadda aan ku xusi karno wordai. In ay iyaduna tahay barxad aan ku wareejin karno waxyaabaha ku jira, laakiin astaamaheeda awgood waxaa fiican inaad ku isticmaasho luqadda Ingiriisiga.
Halkee laga helayaa waxyaabo tayo sare leh oo otomaatig ah
Waxaa jira xulashooyin aan ku sameyn karno waxyaabo otomaatig ah oo tayo sare leh, laakiin taasi waxay ka baxsan tahay boggeena internetka. Mid ka mid ah xulashooyinka ayaa ah maqaallo been abuur ah. Kani waa bog bog leh mashiin ka kooban oo baaraya ereyada muhiimka ah si loo sameeyo waxyaabaha asalka ah ilaa 100%.
Sida ku cad macluumaadka ay soo bandhigtay bogga, mashiinkan waxyaabaha ka kooban wuxuu helayaa macluumaad muhiim ah oo ku saleysan sahaminta matoorada raadinta. Marka tan la dhammeeyo, mudnaan u yeel nuxurka qiimaha leh oo ku guuleysashada asalka asalka ah iyadoo lala kaashanayo keydka macluumaadka ee shabakadda. Waxyaabahani waa xoogaa asal ah, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in matoorada anti-xatooyo ay xaqiijin doonaan waxyaabaha sida gaarka u ah.
Waxaan sidoo kale, wada shaqeyn karnaa degelkan, waafajin karnaa degelkeena otomatiga ah. Laakiin dhab ahaantii waxa aan ku guuleysan doonno tan waa inaan kor u qaadno waxyaabaha aan ka sameysanno mashiinka maaddada ku jira WordPress-keena. Laakiin waa inaan siino ogolaanshaha si loo daabaco. Waxaan dhihi karnaa waan awoodi karnaa inaan helno degel toos u shaqeeya.
Sida looga sameeyo waxyaabaha ku jira Maqaallada Qormooyinka
Nidaamka lagu abuurayo waxyaabaha ku jira boggan waa mid aad u fudud, waxa aan sameyno waa inaan dhigno luqadda iyo ereyada muhiimka ah ee aan dooneyno inaan ka koobanno.. Marka tan la sameeyo, waxaan heli doonnaa xulashooyin aan ku go'aansan karno tirada ereyada aan dooneyno inaan u isticmaalno maqaalkeenna.
Mashiinka mawduucan waxaan ku haysannaa suurtagalnimada inaan ka koobanno illaa 750 erey, runti aad bey u kala duwan tahay. Maqaalku kuma dhamaan doono ereyada saxda ah ee 750 laakiin waa inuu ugu yaraan ku dhowaadaa ama ka weynaadaa qaddarkan. Xitaa waxaa jira suurtagalnimada inaan ku heli karno nuxurka illaa 1000 erey oo leh mashiinkan cusub ee maaddooyinka cusub.
Tayada tayada sare leh, waxaan fursad u leenahay xulashada xulashooyinka sida sameynta cinwaanno, ku darista sawirrada nuxurka iyo xitaa ku darista fiidiyowyada. Waxaa muhiim ah in la ogaado in sawirada iyo fiidiyowyadu duruufaha jira aysan asal noqon doonin; laakiin sida ku cad qeexitaanka barnaamijka, ma ahan inay lahaadaan xuquuq lahaansho.
Maqaallada Been Abuurka, qaybta si aad u dhigto ereyada muhiimka ah ka hor intaadan sameysan waxyaabaha tooska ah.
Bogagga Tooska ah ee loogu talagalay Amazon
Marka la eego bogagga shabakadaha otomaatiga ah ee loogu talagalay Amazon, nidaamka ayaa runtii noqonaya mid aad u fudud. Sababtuna waxay tahay bogga aan u baahannahay inaan ku soo saarno macluumaadka waa mid keliya oo waa Amazon; Looma baahna inaan raadino meelo kale macluumaad dheeri ah inta Amazon ay na siiso. Iyo xitaa haddii aanaan sameynin degel otomaatig ah, haddii aan dooneyno inaan mid ka dhigno kuwa ku xiran Amazon, waxaan u badnaaneynaa inaan si sax ah u dhigno macluumaadka ay Amazon na siiso.
Tani waxay si gaar ah u fududeyneysaa habka abuurista maadooyinka, maadaama aanan ka walwali doonin tayada. Noocyada shabakadaha otomaatiga ah waxaa lagu sameyn karaa isla isku xirnaanta aan u isticmaalno baloogyada webka. Fursadan waxaan ku sharxi doonaa sida loo isticmaalo isla WordPress Automatic plugin iyadoo la adeegsanayo Amazon Affiliate.
Si tan loo gaaro, waa inaan tagnaa aagga Amazon ee qalabkeena otomaatiga ah oo aan sheegno maxay yihiin ereyada muhiimka ah ama raadinta waxa dadka doonaya inay galaan degelkeenna si ay u helaan alaabada Amazon.. Sidaas oo kale waa inaan ku xusnaa khadka tooska ah alaabada aan aaminsanahay inay ku habboon yihiin inaan ku helno degelkeenna.
Sidaa awgeed, qalabku wuxuu ku raadin doonaa dhammaan badeecadaha ku dhex yaal Amazon magacyadan bilowga ah halkaasna wuxuu ka bilaabi doonaa inuu abuuro qoraallo ku saleysan keliya macluumaadka ay Amazon soo bandhigtay.
Dejinta websaydhka tooska ah ee Amazon
Ikhtiyaarrada loogu talagalay Amazon Automatic
Fursadaha ku jira ololaha Amazon way ka yar yihiin kuwa aan ka helno ololeyaasha baloogyada. Si kastaba ha noqotee, waxaan fursad u leenahay soo bandhigida waxyaabo ka mid ah degelladayada oo aan u aragno inay ku habboon yihiin iyo in qalabka wax lagu heli karo. Laakiin xaqiiqda, waxaa ugu wanaagsan in laga tago barnaamijyada ku saleysan qabashada dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah iibinta.
Waan ognahay in Amazon ay dhigeyso waxyaabo badan oo filler ah qaar ka mid ah wax soo saarka iyo in aysan iyagu ahayn khabiirro waxa ay ka kooban tahay waxyaabahaani. Sidaa darteed, uma badna inaan u baahanahay dhammaan waxyaabaha ku jira gudaha Amazon, sababtaas awgeedna way fiicantahay in la caddeeyo dhexdeeda oo keliya waxaan u baahanahay qeexitaanka alaabta.
Haddii aad tan ka booddo, waxay u badan tahay inaan ku dari doonno waxyaabaha ku jira degelkeenna sida faallooyinka alaabada, qiimeynta wax soo saarka; shuruudaha shirkadda ama waxyaabaha aan shuqul ku lahayn sheyga laftiisa. Maaddaama aan tan ku sameyn doonno tiro badan, uma badna in kiisaska midkoodna aan ku ogaan doonno qaladkan oo kale. Sababtaas awgeed, barnaamijka ugu fiican ee lagula taliyay ee loogu talagalay Amazon waa midka horeyba u heli jiray asal ahaan.
U Ololee Websaytka Tooska ah ee loogu talagalay Amazon
Marka ereyada muhiimka ah la dhigo, waxaan u baahannahay inaan cabirno wax kasta oo la xiriira ololaha. Gudaha WordPress waa inaan haysanaa shuruudaha ugu yar ee ay kuxirantahay Amazon waxay na weydiinayaan, iyaga waxaa ka mid ah inaan leenahay labada Amazon API, oo aan ku helno isticmaale iibiyaha websaydhka dhexdiisa.
Marka tan la isku habeeyo oo la iswaafajiyo aagga WordPress-ka qalabka tooska ah ee loo yaqaan 'plugin plugin', waxaan u baahan nahay inaan sameyno ololeyaal aan alaabada uga soo saarayno Amazon. Tan awgeed, si ka duwan ololaha Blog, waa inaanan sameynin ololeyaal aan ka badneyn saacado, gaar ahaan haddii erayga muhiimka ah ee aan dooneyno inaan ku saleyno degelkeenna uu leeyahay alaab aad u tiro badan.
Waxaa lagu qiyaasay in hal saac oo shaqo ah aad dhexgalin karto qiyaastii 100 ama in kabadan alaab gudaha webka, tani way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran hadba inta ay ka kooban tahay alaabooyinka iyo qadarka sawirada ay hayaan. Laakiin qalabku ma shaqeyn doono haddii aan siino daqiiqado kaliya si looga fikiro, maadaama tani aysan soo saari doonin wax soo saar ah.
Mawduucyada Websaydhka Iswada ee loogu talagalay Amazon
Liiska mawduucyada ee kuxiran Amazon oo kuugu adeegi doona bogagga otomatiga ah:
Eeg tusmooyinka Halkan
Eeg tusmooyinka Halkan.
Talooyin haddii aad rabto inaad sameysato Web toos ah
Ugu dambeyntii, waxaan sameyn doonaa talooyin taxane ah oo ay tahay inaad tixgeliso markaad sameysid degel otomaatig ah. Akhriso dhamaan talooyinkaan maxaa yeelay dhamaadka hadii aadan sameyn, waxay u egtahay inaad dhibaato kuheli doonto shabakadaada otomaatiga waqtigeeda; In kasta oo dhibaatooyinkaas badankood aysan sida caadiga ah dhicin, dad badan, gaar ahaan kuwa sida otomaatigooda u wata kumanaan gelitaan, waxaa laga yaabaa inay yeeshaan dhibaatooyinka soo socda.
Talooyinka lacag-bixinta ee bogagga shabakadda otomatiga ah (gaar ahaan baloogyada)
Dhammaan dadka sameeya bogagga tooska ah, iyadoon loo eegin ujeedo isku mid ah, waxay gaari doonaan gabagabada inay lacag ku sameeyaan. Tan awgeed qaar badan ayaa isku dayi doona inay galaan adeegyo sida Google Adsense si ay awood ugu yeeshaan inay lacag ku helaan mareegtooda otomaatigga ah; tani waxay si fudud u noqon kartaa mid aad u dhib badan iyadoo xaqiiqda ah in shuruudaha barnaamijka laftiisu uusan noo oggolaanayn inaan yeelano waxyaabo la duubay.
Si looga fogaado dhibaatadan waxaa lagama maarmaan ah in aan baarno habab kale oo lacag abuur ah oo degel otomaatig ah yeelan karo. Waxaa ka mid ah hababkaas macquulka ah mgid. Qaabkan xoogan ee aadka loo aqoonsan yahay ee lacag-abuurka ayaa loo yaqaanaa inuu yahay midka ugu ballaaran ee loo adeegsado kiisaska boggaga otomatiga ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in shuruudaha lagama maarmaanka u ah marin u helidda barxadani ay aad uga fudud yihiin sidii loo heli lahaa marka loo eego kuwa Google Ads.
Si kastaba ha noqotee, heerarka faa'iidada ma noqon doonaan sida ugu weyn ee aan ka heli karno Google. Laakiin shaki la'aan waxay noqon doontaa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu kasbado bogga tooska ah; Si loo gaadho ujeedada laga gaadhay dhexdhexaad ka noqoshada boggeena, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la maro tijaabooyin kala duwan oo loo baahan yahay taraafikada ugu yaraan 10 booqasho bishiiba.
Ikhtiyaar kale oo lagu kasbado degel toos ah ayaa ah iibinta xiriiriyeyaasha ama maqaallada boggaga kale ee webka waxay xiiseynayaan inay iyagu mawqifkaaga iska dhigaan. Hore ayaan uga hadalnay arintan maqaal kale oo aan halkan hoose idinku dhaafnay. Waxay kaabeysaa Adsense, MGID iyo shabakad kasta. Waxay sidoo kale la jaan qaadi doontaa nooc kasta oo degel ah iyadoon loo eegin inay toos tahay iyo in kale.
Beddelka Adsense: [HAGAHA] Sida loo iibiyo xiriiriyeyaasha iyo maqaallada la kafaala qaaday.
Hubi qaabka Khariidadda bogga iyo waxyaabaha cusub ee la geliyay
Khariidadda bogga ayaa ah bog marar badan laga abuuray plugins sida Yoast Seo ama Rankmatch Pro. Waxay ka caawisaa makiinadaha raadinta inay fahmaan qoraallada ku jira degelkeenna ee la tilmaamayo.. Markaan sameyno maqaallo tiro badan, waxay u badan tahay inaan dhibaatooyin ku qabno khariidadeena bogga.
Sababtaas awgeed, markaan sameyno ololeyaal ballaaran oo aan ku darno boqollaal galitaanno, waa inaan xaqiijinnaa tirada gelitaannada lagu daray khariidadeena mareegaha. Haddii aysan ahayn wax iswaafaqsan, waa inaan tagnaa bogga sheyga ee hagaajinaya khariidadeena bogga waana inaan ku xallino iyada oo ka dhigeyno inaan dib u xisaabino waxyaabaha la gelinayo ee laga heli karo dhexdeeda.
Adeegso beddelaha sawirka Webp
Sawirada websaydhka ayaa ah nooc qaab muuqaal ah oo si weyn u yareeya waqtiga ay sawirradu awoodaan inay ku shubtaan gudaha degelkeenna. Markii aan sameysano bog otomaatig ah, waxay u badan tahay in sawirrada aan soo saareyno ay noqon doonaan sawirro miisaankoodu sarreeyo. Sababtaas awgeed, waxaa ugu wanaagsan haddii aan u beddelno qaabeynta sawirrada aan ku daabacno qaabka websaydhka.
Tan waxaan u isticmaali karnaa qalabka sida beddel webp Wixii Media. Qalabkaani wuxuu awood u leeyahay inuu si toos ah ugu beddelo dhammaan sawirrada aan ugu adeegno degelkeenna qaab websaydhka ah. Markii aan fulineyno ololeyaal ballaaran oo aanan haysan aaladdaan lagu dabaqo degelkeenna, waxay u badan tahay in Marti-gelintayada aysan u adkeysan doonin sawirrada tirada badan ee aad ka soo qaadato bogagga kale.
Sidaa awgeed, haddii aynaan isticmaalin qalab wax lagu beddelo sida beddelaha webp-ka ee Warbaahinta, waxay u badan tahay in degelkeenna uu burburi doono ama uu aad u gaabin doono isla sidaas darteed.
Si joogto ah u tirtir waxyaabaha aan waxtar lahayn ee la soo saaray
Ugu dambeyntiina, waa inaan xusno mid ka mid ah dhibaatooyinka ay leeyihiin bogag badan oo otomaatig ah oo toos ah oo ah tan waxyaabo badan oo aan waxtar lahayn oo isku mid ah; Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay markaan ka soo saarayno bogagga shabakadda, gaar ahaan markaan ka hadlayno wararka, waxaan dhibaato ku qabnaa in la yiraahdo macluumaadku waa ku duugoobay matoorada raadinta.
Sidaa awgeed, mawduucani wuxuu qaadanayaa meel ka mid ah Marti-gelintayada tanina waxay si liidata wax u dhimaysaa xawaaraha aan ugu adeegi karno macluumaadka adeegsadeyaashayada. Sababtaas awgeed, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaan si joogto ah uga takhalusno waxyaabaha aan ku aragno inaysan lahayn booqashooyin ama waxyaabo kasta oo aan maareynin booskooda makiinadaha raadinta.
Bogagga iswada ee xilligan la joogo waa mid ka mid ah habka ugu isticmaalka badan ee lacag looga helo halkaas. Fududeynta ay u isticmaasho abuurista waxyaabaha waxay ka dhigaysaa meheraddan mid soo jiidasho leh, taas oo si joogto ah loo meeleeyo laguna gaaro faa iidooyin badan xaaladaha qaarkood iyada oo aan loo baahnayn dadaal badan.
Si kastaba ha noqotee, ma aha hawl fudud in la dejiyo bogga tooska ah iyo, sida wax kasta oo kale, waxay u baahan tahay shaqo badan iyo xitaa maalgashi annaga si aan ugu helno natiijooyin aad u fiican. Talada aan kaa siin karno citeia waxay ku saleysan tahay adkeysi iyo shaqada ay tahay inaan sameyno si aan u gaarno natiijooyinka ugu wanaagsan adduunka SEO.
Markaa inaan soo gabagabeyno taladeena ayaa ah inaad adkaysi yeelato markaad wax ku daabacayso websaydhkaaga otomaatiga ah, inaad ku darto siyaabo kala duwan oo taraafiko ah si aad ugu sii hormarto, halkaasoo aad ku isticmaali karto shabakadaha bulshada iyo taraafikada kale ee la heli karo marka lagu daro noolaha xilligaa bilow.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: [KHILAAF CAAFIMAAD AH] Sida loo meeleeyo websaydhkaaga Quora
fur boggaga otomaatiga tooska ah fur bogagga tooska ah sida loo furo bog otomaatig ah sida loo furo degel otomaatig ah sida loo abuuro waxyaabo otomaatig ah sida loo sameeyo bogga tooska ah sida loo sameeyo bogga tooska ah sida loo sameeyo bogga tooska ah sida loo abuuro degel otomaatig ah sida loo abuuro degel toos ah talaabo talaabo ah sida loo sameeyo shabakad otomaatig ah sida loo sameeyo shabakad otomaatig ah ka samee xoq barta tooska ah samee bogga tooska ah abuuro tallaabooyin baloog toos ah shaqooyinka bogga otomaatiga ah qalab si loo abuuro nuxur toos ah tilmaamaha lagu sameeyo shabakad otomaatig ah tallaabooyinka lagu dhisayo barta otomaatiga ah kumbuyuutarrada qoraalka tooska ah loogu talagalay webka barnaamijyo si loo abuuro bogag internet oo otomaatig ah waa maxay bogga tooska ah mawduucyada loogu talagalay baloogyada otomaatiga ah otomaatiga webka abuuro wordpress bogag otomaatig ah wordpress plugins loogu talagalay baloogyada otomaatiga ah